Ubeka uNkulunkulu phambili emculweni | News24
Ubeka uNkulunkulu phambili emculweni
UMnuz Joe Ndlovu ongumculi wokholo ISITHOMBE: sithunyelwe
OWESILISA ozinze endaweni eyaziwa ngokuthi ise-Summerveld uMnuz Joe Ndlovu oneminyaka engama-26 ubudala uthi unikele impilo yakhe kuNkulunkulu futhi uzoqhubeka ukushumayela iVangeli ngomculo wokholo.
Lo mlisa uthi umculo uqale ukuwuthanda kusukela esemncane eneminyaka eyi-11 ubudala, kodwa ngaleso sikhathi wayethanda umculo owaziwa ngokuthi yisicathamiya. “Ukucula ngikuthande ngisawumfanayana ngize ngaba yingxenye ye-choir yase bandleni. Ngokuhamba kwesikhathi ngijoyine ithimba labaculi esikoleni.”
Uthe ngo-2013 yilapho abona khona impilo yakhe emculweni ishintsha ngedlela eyisimangaliso ngoba waba nothando lokucula umculo wokholo. “Ngonyaka ka-2013, ngabanothando lokucula umculo wokholo lolu thando lwangenza ngaze ngaqopha ucwecwe olunesihloko esithi: Lelivangeli ngo-2014 eline zingoma zokholo. Kwaba kuhle kakhulu ngoba ngakwazi ukudayisa ama-copy angama-500,” kusho yena.
Le nsizwa ithe iyagqugquzeleka uma ibona abaculi bokholo abadumile becula izingoma zabo.
“Ngibukela kakhulu kubaculi abafana no Dkt Rebbeca Malope oyindlovukazi yomculo wokholo, nabanye kubalwa uLundi Tyamara noVuyo Mokoena.”
UMnuz Ndlovu ubeyi ngenxye yemcimbi emkhulu eNingizimu Afrika ngaphambilini.
“Kuningi engingathi ngiziqhenya ngakho esengibe yingxenye yakho selokhu ngaqala le ndima yomculo. Ngicule ezindaweni eziningi kubalwa e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre [ICC], eCity Hill Church, ohlelweni olaziwa ngokuthi yi-eTV Sunrise nase bandleni i-Umlazi Ark Fellowship.”
uMnuz Ndlovu uthe kuningi afisa ukukwenza ngethalente lakhe lokucula njengoku fundisa intsha ngomculo wokholo nokuthi ikwazi ukuqhakambisa amathalente ayo emphakathini. “Ngiyazi ukuthi iningi intsha enethalente lokucula yingakho ngifisa ukuyiqeqesha ukuthi ibe ngabaculi bomculo wokholo. Iningi lentsha alazi nokuthi kumele liqalephi uma lifuna ukuqhakambisa ithalente layo yingakho ngifisa ukuthi ngiyisiza. Lokhu futhi kungezinye zezindlela zokuthi intsha ingabi wuvanzi emgwaqeni,” kusho yena.
“Leli thalente ngaliphiwa wuNkulunkulu ngabe nginephutha uma ngingalivezi emphakathini naseNingizimu Afrika. Ngifisa itsha ikwazi ukushumayela izwi lika Nkulunkulu ngoba yilona elisiphilisayo.”
“Umculo unamandla futhi ukwazi ukupholisa umphefumulo oxakekile. Umculo ulekelela ekuzwakaliseni uthando, uxolo nobubele.”
Uthe ubonga abazali bakhe kukona konke akwenzayo ngoba bebemgqugquzela ngaso sonke isikhathi.
“Abazali bami bangifundise okuningi empilweni njengo kuziphatha ngendlela efanelekileyo, kukona konke engiyikho ngibonga abazali bami. Ngibonga nesipho sempilo nokungiseka ngaso sonke isikhathi, ngila engikhona namhlanje ingenxa yeziyalo zabo.”
Uthe umyalezo awushiya nentsha yaseNingizimu Afrika wukuthi kukona konke ekwenzayo kumele ibeke imfundo phambili bese okunye kuyalandela.
“Ngihlale ngiyitshela intsha ukuthi ingapheli amandla ngasekufundeni futhi kumele ingadlali ngekusasa layo. Impumelelo uyithola uma ubekezela futhi uma uzimisela.
Okubalulekile ukuthi ungakhohlwa uNkulunkulu ezwintweni zonke,”
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngoMnuz Joe Ndlovu noma uma uthanda ukuzwa umculo wakhe noma ufuna ukungenela amakilasi akhe omculo shayela inombolo ethi: 078 298 8275.
One jackpot winner in tonight's Daily Lotto draw 2 minutes ago Click here for the full list of lottery results